Nrụpụta na nrụpụta ihe igwe na -arụ ọrụ na igwe China Igwe Morton
Ịchọrọ ịchọta ọkachamara Multifunctional Pile Knitting Machine Machine rụpụtara maka akwa akwa gị chọrọ?
Anyị nwere ike ịnye igwe eji arụ ọrụ igwe eji arụ ọrụ dị elu nke dabara adaba maka mkpa gị kacha mma.
NILE ỤBỌCHỊ Nnukwu Ndị na -eri nri
1.Multifunctional High Pile Knitting Machine Iji ụgbọ elu aluminom alloy n'akụkụ akụkụ nke igwe iji melite arụmọrụ mgbasa ọkụ ma belata nrụrụ ike nke igbe cam.
Nhazi 2.One Stitch iji dochie njehie anya nke anya mmadụ site na izi ezi nke igwe, yana ngosipụta nha ziri ezi na nhazi Archimedean dị elu na-eme ka usoro mmegharị nke otu akwa dị na igwe dị iche iche dị mfe ma dị mfe.
3.Multifunctional High Pile Knitting Machine a na -akpọkwa Multifunctional loop cut knitting machine.
4.nke imewe nke kamị na agịga na mma, dị mfe maka ngbanwe igwe, nwere ike idozi nsogbu ọdịnala dịka oke ogologo ogologo, ihe adịghị mma nke ikpo dị elu na nke dị ala, oke ọkpụrụkpụ, mmetụta ihicha ọjọọ. Elu akwa ahụ mebiri site na otu igwe nwere ike nweta ịdị elu dị elu dị elu.
5.This igwe bụ njikọ maka ihe eji arụ ọrụ, ihe dị omimi, ụkpụrụ akwa na imepụta ergonomics.
6.Multifunctional High Pile Knitting Machine na -egosipụta dị ka ọmarịcha anya, ezi uche na usoro bara uru.
7.N'iji otu ụlọ ọrụ ihe dị elu na ihe nrụpụta CNC dị na ya, iji jide n'aka na ihe ndị mejupụtara na ihe akwa chọrọ.
8. Teknụzụ izizi ụlọ izizi sitere na Korea na -enweghị akwa na ntinye. Ọ nwere triangle pụrụ iche nwere njiri mma agịga. Ọ nwere ike igbochi ọtụtụ nsogbu ọdịnala ka ọ dị ka akwa kwụ ọtọ na vetikal, ntutu na -enweghị isi na ntụpọ dị iche iche.
Igwe a dabara na ihe ndị a kpara akpa dị ka usoro silk fiber, owu, ajị anụ dị ọcha na eriri kachasị mma. Ọ nwere ike ịkpa ụdị cashmere Korea niile, dị ka coral cashmere, cashpre carp, Kirin cashmere, velveteen, cashmere sunflower, peacock cashmere, cashmere afụ, cashmere owu / ajị ajị anụ, ajị anụ PV, South Korea cashmere, ajị atụrụ, nke dị oke nro cashmere na ajị anụ. A na -etinye ha n'ọrụ n'uwe, mkpuchi, ihe ndina, ihe egwuregwu ụmụaka, akwa sofa, kapeeti, blanketị na ihe mkpuchi ụgbọ ala. Akwa ahụ nwere ike gboo mkpa ngwa ngwa nke ahịa nwere ebumnuche dị larịị!
Nke gara aga: Ọgịrịga okirikiri Knitting Machine
Osote: Lower Loop Cut Open Obosara Jacquard Machine
Ọgịrịga okirikiri Knitting Machine
Ugboro abụọ Jersey Jacquard okirikiri Knitting Machine
Atọ Eriri anụ Knitting Machine
Akwa ikpo okirikiri Knitting Machine